Firefox 74 inouya neRLBox, Lockwise zvinowedzera, TLS 1.0,1.1 yakaremara uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeFirefox 74 webhu bhurawuza yaburitswa, pamwe neshanduro yeshanduro yeFirefox 68.6 yeiyo Android chikuva, kuwedzera kune yekuvandudza yazvino refu-tsigiro vhezheni "68.6.0".
Iyi itsva vhezheni yebrowser inouya nedzimwe nhau dzinonakidza, yatinogona kutaura nezvayo kuiswa kweiyo RLBox nyowani yekuparadzanisa michina (Linux chete), pamwe nekubatanidzwa kwe Zvakawanda-Akaundi Midziyo, TLS 1.0 uye 1.1 yakaremara pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda.
1 Chii chitsva muFirefox 74?
2 Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 74 paLinux?
Chii chitsva muFirefox 74?
Imwe yeshanduko huru inomira mushanduro iyi nyowani yebrowser iyo inobatsira vashandisi veLinux ndiyo iKubatanidzwa kweRLBox kusarudzika mashandiro, inoitirwa kuvharidzira kushandiswa kwekushaya simba mune echitatu-bato basa maraibhurari.
Padanho rino, kusurukirwa kunogoneswa chete kune raibhurari yeGrafite, inova nebasa rekupa mafonti.
Imwe shanduko ndeye yakaremara rutsigiro rweTLS 1.0 uye TLS 1.1 maprotocol, iyo yakamboshandiswa kuwana masayiti kuburikidza ne "yakachengeteka kutaurirana" chiteshi, asi nekuda kwekuti iwo maprotocol aya akange atoonekwa seasina basa kwemwedzi yakati wandei, TLS 1.2 tsigiro yave kushandiswa.
Zvakare, mune yekuburitsa chinyorwa, vamwe vanotaurwa shanduko kuFacebook Container plugin seMulti-Account Midziyo plugin zvino yataurwa pamwe nekumisikidzwa kwechirevo chemidziyo yemukati.
Midziyo inopa kugona kusiyanisa marudzi mazhinji ezvinyorwa pasina kugadzira maprofayiri akapatsanuka, zvichikubvumidza iwe kupatsanura ruzivo kubva kumapoka ega emapeji.
Kune rumwe rutivi, DNS pamusoro peHTTPS inogoneswa nekusarudzika kune vashandisi veUS. Iyo yakasarudzika DNS mupi ndeye CloudFlare (mozilla.cloudflare-dns.com inowanikwa pane Roskomnadzor's block zvinyorwa) uye NextDNS inowanikwa senge sarudzo.
En Zvakakombama, (iyo browser-based system plug-in iyo inopa iyo "nezve: logins" interface yekutarisa yakachengetwa mapassword) ikozvino inotsigira kurongedza mukudzosera odha (Z kusvika A).
WebRTC yakawedzera kudzivirirwa pakurasikirwa neruzivo yemukati IP kero panguva yezwi uye vhidhiyo kufona uchishandisa iyo "mDNS ICE" mashandiro, ayo anoviga kero yemuno kuseri kwesimba rinogadzirwa rakasarudzika chinongedzo chinoonekwa kuburikidza nemulticast DNS.
Nezve shanduko dzakanangiswa kuWindows uye macOS, iyo kugona kuendesa profiles kubva kuMicrosoft Edge browser zvichienderana neiyo Chromium injini.
Pamusoro pehunyanzvi uye kugadzirisa bug, Firefox 74 yakatarwa makumi maviri nematambudziko, ayo gumi nerimwe (akanyorwa pasi peCVE-10-2020 uye CVE-6814-2020) akaratidzirwa seanogona kutungamira mukuitwa kwekodhi yakaipa kana uchivhura mapeji akagadzirwa.
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 74 paLinux?
Munguva pfupi iri kutevera, iyo Firefox 75 bazi ichatanga kupinda muchikamu chekuyedza beta, icho chakarongerwa kuvhurwa muna Kubvumbi 7, pamusoro pekuumbwa kweLinux inovaka muFlatpak fomati yebeta re beta reFirefox 75. yatanga
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 74 inosvika neRLBox, kugadzirisa, TLS 1.0 uye 1.1 yakaremara uye nezvimwe